List price: 10.00 UKP
Waan akhriyey buuggan Guri Waa Haween. Buug ka weyn; waa abwaan yare (short encylopedia), waayo xilligan dad aan tiro badnayn baa dhaqanka reer guuraaga soomaalida yaqaan; in ka sii yarna waxa ay la socdaan saamaynta nolosha magaaladu ku yeelatay nolosha reer guuraaga ee soomaalidu ku dhisan tahay. Dhinac buugggu wuxuu abuurayaa ogaansho deegaaneed (environmental awareness); dhinacna wuxuu boorka ka jafayaa ilaha af soomaaligu ka soo butaaco oo ah nolosha miyiga, noloshaas oo murti-nololeed oo badan aan weli lagala soo dhex bixin.